Trump: Dhibaatada Korea-da Waqooyi waa la Xalin Doonaa
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Korea-da Waqooyi ay tahay “Dhibaato weyn”, hase yeeshee waxa uu ra’iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe u xaqiijiyey in arrimaha ku saabsan dalkaas la xalin doono.
“Maskaxdeyda ayey arrintan ku taagan tahay…waa dhibaato aad u weyn, waa dhibaato dunida haysata, waana la xalin doonaa. Mar ay ahaataba waa la xalin doonaa, taas maanka ku hay” ayuu yiri Trump oo dhinac fadhiya Abe, kaasi oo ay ka wada qeyb galayaan shirka dalalka G-7.
Halista nuclear iyo tan gantaallo ee sii kordheysa ee Korea-da Waqooyi ayaa loo arkaa caqabad amni oo weyn oo Trump uu wajahayo, laagana sugayo inuu xal u helo.
Trump waxa uu horey wacad ugu maray inuu ka hortagi doono in Korae-da Waqooyi ay wood u yeelato inay hesho gantaallo Nuclaer oo gaari kara Mareykanka, kuwaas oo khubaradu ay sheegeen inay heli doonto ka hor sanadda 2020.